Ratidza makiyi aunodzvanya pa screen ne ScreenKey | Linux Vakapindwa muropa
Ratidza makiyi aunodzvanya pahwindo ne ScreenKey
Si iwe uri mumwe wevaya vanoda kuita vhidhiyo dzidziso uye ugovagovana pamapuratifomu anonyanya kufarirwa pamambure kana iwe uri mumwe wevaya vanobatsira vamwe nemavhidhiyo kana kuburikidza nekutapurirana kubva kudesktop yako pane projekita ndinogona kukuudza izvozvo chikumbiro chinotevera chinogona kukubatsira zvakanyanya.
ScreenKey chishandiso chikuru open sosi iyo yavanokwanisa kutsigira nayo kubvira nazvo unogona kuona akakosha marejista pachiratidziri, yakanaka kwazvo ficha yezvimwe zvakarekodhwa zvechiso uye dzidziso dzevhidhiyo.
1 Nezve ScreenKey
2 Maitiro ekuisa ScreenKey paLinux?
Nezve izvi isu tinogona kuti iwe unomira kuita pasina yechinyakare notepad iyo iwe yaunowanzo shandisa kugona kuratidza iwo mirairo inofanirwa kushandiswa kune vateereri vako.
ScreenKey Iyo yakafuridzirwa neScreenflick, asi ndinofanira kutaura kuti iyi app haigone kunyora skrini, kunyangwe yakanyatsokodzera iwo akasiyana maficha ayo anotendera iwe kuti utore desktop yako.
ScreenKey inouya neakawanda sarudzo kusanganisira whitespace marongero, multi-monitor rutsigiro, akawanda marekodhi modhi, ane simba, inogadziriswa font mhando, uye dzakasiyana siyana keyboard kududzira nzira, pakati pevamwe.
Ichi chirongwa Pakutanga kwaive kuchinjwa (forogo) yechirongwa chezita rimwe chete asi izvi zvakasiiwa mushanduro 0.2, gare gare rakazonyorwazve kunyatso, riine mabug fixes uye nekuwedzera maficha matsva.
Pindai Iwo makuru maficha pa ScreenKey atinogona kuwana ndeaya anotevera.
Iyo yakavhurika sosi, iyo inogona kutorwa pasi, yakagadziridzwa uye kugoverwa, inowanikwa paGitHub
Kuita kwemunhu: inogadziriswa saizi saizi, zvinzvimbo uye mavara
Sarudzo yekusimbisa mabhatani echangobva kuitika
Multiple Monitor rutsigiro
Tsigiro yekubatanidzwa nefonti inotyisa
yakagadziriswa reverse kugadzirisa
Inotsigira nzira dzakasiyana siyana dzekushandura keyboard
Tarisa uone ScreenKey, kuti uone zviri pamusoro uye zvimwe zvinhu kutanga-ruoko.
Mushure mekuita ScreenKey, ichaonekwa sechiratidzo munzvimbo yekuzivisa (system tray) umo matinokwanisa kumisikidza sarudzo dzakasiyana dzaanotipa.
Sezvambotaurwa, iyi Anwendung inowirirana nevakawanda monitors, uye inogona kuiswa pane yakakosha skrini kana pane chero kunyorera uye chero kupi.
ScreenKey inogona kuratidza akajairwa makiyi uye makiyi musanganiswa, unogona kugadzirisa font uye ruvara rweakaratidzwa minda, iyo yekuratidzira nguva (latency), uye akati wandei mamwe.
Maitiro ekuisa ScreenKey paLinux?
Si vanoda kuisa izvi zvinoshandiswa pamashandisirwo avo, unofanirwa kutevedzera inotevera rairo yatinogovana newe pazasi.
Si vashandisi veDebian, Ubuntu, Linux Mint kana chero imwe sisitimu yakatorwa yeizvi, iwe unofanirwa kuisa zvinotevera zvinotevera usati waisa iyo application.
Isu tinofanirwa kuvhura terminal mune ino system neCtrl + Alt + T uye ita unotevera kuraira mairi:
Iye zvino tave kuenda kunotora iko kunyorera ne:
Isu tinopinda dhairekitori ne:
Uye isu tinoenderera mberi nekuisa iko kunyorera ne:
Kunyangwe, kana iwe usiri kuda kuita yekumisikidza, unogona kumhanyisa iyo application usina kuisa ne:
Iye zvino kune avo vari vashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero kugoverwa kwakatorwa kubva kuArch Linux, vanogona kuisa kubva kuAUR repositories.
Ivo vanofanirwa chete kuve neAUR mubatsiri akaisirwa, vanogona kubvunza chinyorwa chinotevera pandinokurudzira vamwe.
Pane iyo terminal ivo vanongofanira kutaipa:
Panguva ye avo vari vashandisi veFedora, vanogona kuisa iyo application nerubatsiro rweinotevera repository iyo yavanofanira kuwedzera kuvhura terminal uye kuita unotevera kuraira mairi:
Kana zvakadaro vari Fedora 27 vashandisi vanofanirwa kuwedzera iyi repository:
Para kumwe kugovera kunofanirwa kuve nePython yakaiswa, sezvo kuri kudikanwa kwekuvimbika kwekushanda kwechishandiso ichi.
Iye zvino ngatitorei kunyorera ne:
Uye ivo vanogona kuimhanya ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Ratidza makiyi aunodzvanya pahwindo ne ScreenKey
screenkey iri mune ubuntu repositories, saka inogona kuiswa zvakananga.
kukanganisa: Setup script yakabuda ne *********************************************** * ************************
* Kuvaka PyGTK uchishandisa distutils kunongotsigirwa pamahwindo. *
* Kuti ugadzire PyGTK munzira yakatsigirwa, verenga INSTALL faira. *
Usatombofunga nezve kutevera iyo nzira muDebian kana Ubuntu, IZVI HAZVI BASA.
Sigil chishandiso chakanakisa kugadzira uye kugadzirisa Epub e-mabhuku paLinux